▷ Mianara manitsy amin'ny Fortnite
Mianara manova amin'ny Fortnite
Olona milalao Fortnite tokony ho fantatr'izy ireo fa ao anatin'ny tontolo malalaka novolavolain'i Epic Games misy ny mety hananganana karazana rafitra rehetra avelan'ny lalao.
Saingy tsy ny fomba azo ananganana ny olona hanangana ireo rafitra ao an-tsainy fotsiny. Raha azo atao, ny olona dia manana fahaizana manova izay rehetra ataony ao anatin'ny lalao ihany koa.
Fantatra amin'ny hoe fanontana ary maro ny olona no tsy mahalala ny fomba fiasan'izany, koa handray ny olana izahay hanazava azy bebe kokoa bebe kokoa ho an'ireo izay liana hianatra zavatra vaovao amin'ny lalao.
Ahoana no fanitsiana sombin-javatra ao Fortnite?
Raha vantany vao tafavoaka tamin'ny dingana fananganana lalao ny olona dia hanana ny fahaizany koa amboary ireo sombin-javatra navelan'izy ireo tao anatin'ny sarintany.
Ho an'izany dia ilaina ny manindry ny lakilen'ny bokotra na ny bokotra ilaina hidirana amin'ny maody fanovana. Avelany ho kivy ny bokotra dia ho hitany fa hiseho manga vetivety ilay sombin-javatra eo alohan'izy ireo.
Rehefa manomboka manova olona ny olona iray dia mety manomboka miova loko izany firafitra izany. Raha mbola manga ny rafitra, ny fanovana dia azo atao amin'ny fahafaham-po.
Fanontana azo alaina ao Fortnite
Raha sanatria ny fikirakirana tsy mitombina ho mena ny loko ary tsy hamela ny fanovana hatao.
Raha vantany vao nanamboatra ny ampahany izahay ary nitahiry ireo fanovana, dia ho hitantsika ny fanovana natao ary ho vita ilay ampahany. Io dia ahafahan'ny olona mahay mamorona firafitra misy habe sy fomba samy hafa.
Ahoana ny fomba fananganana ao Fortnite